Nezvedu - Xuzhou Chuancheng Girazi Zvigadzirwa Co, Ltd.
Xuzhou Chuancheng Glassware Co, LTD.is yekugadzira kambani iyo inonyanya kugadzira mumagirazi ekugadzira mabhodhoro ekugadzira, kutema tekinoroji, yakakwira borosilicate girazi zvigadzirwa. Iyo kambani ine mvura iri nyore, nyika uye mweya wekufambisa, padyo neLianyungang port. Tine mitsetse yekugadzirwa shanu, uye mitsara yekuchera makumi maviri, iyo inogona kuburitsa mabhiriyoni mazana maviri nemakumi manonwe pazuva. Vashandi vedu vekambani varipo vanopfuura mazana mashanu, kusanganisira makumi maviri nemasere vane ruzivo rwevashandi vehunyanzvi uye gumi nemashanu vashandi vekuongorora. Kambani yedu inogara ichiteera sevhisi, yakatendeka inoshanda, Ramba uchivandudza, Hupenyu kutanga, Mutengi kusimba '.
Fekitari yedu inogadzira akawanda makuru marudzi
Nezvigadzirwa zvepamusoro zvemhando yepamusoro uye zvakakwana, sainzi yemhando yekutarisira system, isu takatotangisa hukama hwebhizinesi nevatengi vekunze uye vekunze. Yekutendeseka kukuru, simba rekambani uye kunaka kwechigadzirwa.
Nei usarudze Xuzhou Chuancheng Glassware Co, LTD.
ur fekitori inogadzira zvinopfuura mazana matatu emhando dzakasiyana: Huchi yegirazi bhodhoro, jamu girazi bhodhoro, girazi regirazi, bhotoro renyuchi, bhiniga vhiniga, bhodhoro remafuta, bhodhoro remafuta, bhodhoro rewaini, bhodhoro rewaini yegirazi, bhodhoro remagirazi. Bhodhoro, bhodhoro rewaini yemichero, bhodhoro rewaini yewaini, bhodhoro rejusi, bhodhoro remishonga, bhodhoro rekofi, kapu, bhodhoro, kutonga girazi bhodhoro, girazi kenduru, girazi chirongo, mukombe wemvura, mvura. Mukombe, pamuromo mvura bhodhoro, michero tii bhodhoro, vhiniga yewaini bhodhoro, mupendero wevhiniga bhodhoro, bhodhoro rezvinonhuwira, bhotoro reOpenzi, mhepo yemafuta echokwadi bhodhoro, kirimu bhodhoro, bhonzo retsika yezvimwe uye zvichingodaro. Inogona zvakare kushandiswa kugadzirisa zvakadzama zvigadzirwa zvegirazi senge sando, kupuruzira, kudhinda silika, kubheka, kunyora, kubheka ceramics, nezvimwe.